ခေါင်းအုံးအမှုပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China Pillow Case Manufacturers
ဖက်ရှင် polyester ခေါင်းအုံးအမှု
မင်းလိုသဘာဝလှပမှုဟာသဘာဝအလှအပအချို့ကိုရထိုက်တယ်။ ဤသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖဲခေါင်းအုံးသည်စက်ရုံအခြေပြုပစ္စည်းများမှရရှိသည်။ သင်၏ခေါင်းအုံးသည်သင်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်ကောင်းသည်ကိုသိရှိခြင်းကသေချာစွာအိပ်ပါ။ 1. ပစ္စည်း oly ဖဲ။ ၂။ အရွယ်အစား Standard size: 20'x26 '' Queen size: 20''x30 '' King size: 20''x36 '' 3. Color option ifferent color options ။ အဖြူ၊ ငွေ၊ အနက်ရောင်၊ ပန်းရောင်။ စိတ်ကြိုက်ဖဲခေါင်းအုံးထည်ရွေးချယ်မှုများ၏အတိုချုပ်နိဒါန်း ၁၀၀% Polyester satin ...
မျက်လုံးမျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားသော Poly ဖဲခေါင်းအုံး